गोरखनाथ मन्दिरमा यसरी चलिरहेको छ १८ औँ रोट महोत्सव (फोटो फिचर) | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखनाथ मन्दिरमा यसरी चलिरहेको छ १८ औँ रोट महोत्सव (फोटो फिचर)
गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोरखनाथ मन्दिरमा सवालाख रोट महोत्सव चलिरहेको छ ।
महोत्सवको सोमवार छैठौँ दिन हो । कोभिड १९ को कारण गत र यस वर्ष रोट महोत्सवको रौनक छैन ।
‘अहिले भक्तजनलाई आउन दिइएको छैन, परम्परालाई निरन्तरता दिन सवालाख रोट चढाएको छौँ’ सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका केन्द्रिय अध्यक्ष रामजी अर्यालले भने । पहिले रोट बनाउने, पकाउन सघाउने साधक साधिकाले गर्थे । तर अहिले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले रोट बनाउने, पकाउने गरिरहेका छन् ।
सिद्धाश्रम शक्तिकेन्द्रको आयोजनामा हरेक वर्ष चण्डि पूर्णिमाको दिन देखि ११ दिन सम्म चल्ने रोट महोत्सवको कोरोना प्रभावका कारण रौनक भने छैन । यस वर्ष नित्य पुजा अन्र्तगत रोट चढाइएको केन्द्रका अध्यक्ष अर्यालले बताए ।
गतवर्षदेखि कोरोनाको प्रभावले रोट महोत्सव समान्य रुपमा गरिएको दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भुषालले बताए । राजा पृथ्वी नारायण शाहका गुरु गोरखनाथ प्रकट भएको दिनको रुपमा हरेक वर्ष सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले रोट चढाउँदै आएको छ ।
गोरखनाथ र गोरखकाली मन्दिर परिसरमा भजन, कृतन, पुजापाठ गरेर सयौँ भक्तजनको उपस्थितीमा हुने रोट महोत्सव कोरोना प्रभाव र निषेधाज्ञाको असरले केही रौनक छैन । गोरखनाथलाई सबैभन्दा बढि मनपर्ने भएकाले रोट चढाएर खुसी बनाउन सकेमा कुनै संकट आई नपर्ने धार्मीक मान्यता छ । गहुँ, जौ र धेरैजसो चामलको पिठो रोट बनाउन प्रयोग गरिन्छ । बिभिन्न ५२ थरीका शक्तिबर्दका मसला मिसाएर रोट बनाईन्छ ।